Brezila sy biofuel | Fanavaozana maintso
Adriana | | Biofuel, Biodiesel, Angovo azo havaozina
Brasil Izy io dia iray amin'ireo firenena manan-danja indrindra any Amerika Latina noho ny habeny sy ny harinkarena goavambe izay ampitomboin'ny halehibe azy harena voajanahary. Fa io ihany koa dia iray amin'ireo voalohany any amin'ny faritra izay mitady alternatives ho an'ny fuel fosil.
Nanomboka tamin'ny taona 2005 dia miasa i Brezila biofuels ary mandrisika an'ity indostria ity hanome ny ankamaroan'ny tsena anatiny, indrindra ho an'ny milina fambolena sy ny fiara mavesatra. Izy io no mpamokatra bioethanol faharoa lehibe indrindra manerantany miaraka amin'ny 26 miliara litatra ary biodiesel 1,1 miliara litatra tamin'ny 2009.
Amin'ny taona 2010 dia tombanana fa hamokatra biofuel 2400 miliara litatra izy io.
Nikasa ny ho lasa iray amin'ireo mpamokatra solika lehibe indrindra eto Brezila i Brezila. Izany no antony ampanjifaina be an'ity orinasa ity fa manampy ny tantsaha ihany koa mba hahafahan'izy ireo mandray anjara amin'ny rojom-pamokarana miaraka amin'ny vokatra vokariny.
Any Brezila, ny vokatra isan-karazany dia ampiasaina hanamboarana biodiesel toy ny soja, fary, mangahazo, jatropha ary na dia ny sisa amin'ny akondro aza, ahidrano, ankoatry ny sasany.
Brezila dia tsy te hametraka ny fiarovana ara-tsakafo Noho izany, miombon-kevitra amin'ireo tantsaha izy ireo mba tsy hanovan'izy ireo ny vokany fa samy hanome ny sehatra iray ny tsirairay.
Ny fanjakan'i Brezila dia manao politika fampiroboroboana isan-karazany hampitomboana ny famokarana, ny fitehirizana ary ny fitaterana ny biofuel izay ahazoana tombony bebe kokoa ary afaka manolo ny biofuel. lasantsy fosily, ary koa ny famoronana asa amin'ity sehatra ity.
Noho ny hetsiky ny fanjakana dia orinasa vahiny marobe no mampiasa vola amin'ny biofuel ao amin'ity firenena ity, ka mampihetsika ny toekarena.
I Brezila dia ho mpilalao lohalaharana amin'ny tsenan'ny biofuel amin'ny taona ho avy noho ny harena sy harena voajanahary rehetra ananany ao amin'ny faritaniny ary ny fahaizana manararaotra tombony azo ampitahaina ary mifaninana.
Mahatratra a fambolena maharitra sy tontolo iainana, ny fitazonana ny fiantohana ara-tsakafo sy ny famokarana biofuel be dia be mandritra ny fotoana maharitra dia ny fanamby sasany tsy maintsy tratran'i Brezila sy ny sisa amin'ireo firenena mpamokatra solika solony mba hitazomana ny fandanjana ara-toekarena, sosialy ary tontolo iainana.
Làlana feno mankany amin'ny lahatsoratra: Fanavaozana maintso » Biofuel » Biodiesel » Brezila sy biofuel
Yan dia hoy izy:
Nandritra ny fizotry ny fivoarany dia nanjakazaka tamin'ny natiora ny olombelona, ​​nataony izany ho loharanon'ny sakafo sy angovo. Maherin'ny 20000 XNUMX taona lasa izay dia takany fa afaka mampiasa hazo sy zavamaniry maina izy handrahoana ny sakafony ary hanome hafanana azy amin'ny toetr'andro mangatsiaka. Voajanahary io fomba io satria tsy nanova ny lanjan'ny angovo, ny tontolo iainana ary ny tontolo iainana. Nandritra ny fotoanan'ny revolisiona indostrialy dia teo, ho an'ny zanak'olombelona, ​​dia manomboka ny iray amin'ireo olana mety hiteraka famongorana, satria tato anatin'ny taona vitsivitsy lasa, ny fahasimbana nateraky ny natiora dia nanjary niharihary kokoa, io ihany no jerena manodidina antsika ny mahalala fa misy zavatra tsy mety. Ny tsy fandanjana aterak'izany dia tsy eo amin'ny tontolo iainana intsony, fa misy lafiny ara-tsosialy ihany koa, ny fitrandrahana tafahoatra ny fananantsika no ho tampon'ny fandringanana antsika, ankehitriny ny olombelona amin'ny maha-karazany dia miatrika toe-javatra sarotra tokoa, loharanon'ny angovo izay ninoanay ho tsy voafetra izao Afaka taona vitsivitsy vao lany. Ireo lazaina fa angovo fôsily dia miditra amin'ny fotoana tsy fahampiana, izay hiteraka, araka ny nampoizina, ny iray amin'ireo krizy ara-toekarena mahatsiravina indrindra tato ho ato. Izao tontolo izao, indrindra ireo firenena mahantra, dia hiatrika loza maro, hiakatra amin'ny sehatra tsy ampoizina ny vidin'ny vokatra ary hiaina ny mosary mandringana indrindra izao tontolo izao. Ny rafitry ny toekarena ankehitriny izay mifehy ny ankamaroan'ny firenena no hiteraka krizy io amin'ny farany, io dia toy ny trano karatra izay hirodana na ho ela na ho haingana. Noho ny fanatontoloana izay mampivondrona ny firenena tsirairay amin'izao tontolo izao, dia ho voadona amin'ny fomba iray na amin'ny fomba hafa ny sasany ary ny sasany hanana hery bebe kokoa noho ny hafa. Zava-dehibe ho an'ny firenena na firenena ny fampiharana ny politikany maharitra momba ny angovo maharitra izay manafaka azy ireo amin'ny fiankinan-doha amin'ny loharano fôsily, indrindra ny solika. Ny loharano angovo tsy mahazatra dia mitana andraikitra lehibe. Betsaka ny angovo azo ampiasaina eto amin'ny planetantsika, ny herin'ny masoandro fotsiny dia mamokatra 15 heny ny hery lanintsika ao anatin'ny iray andro. Io loharanon-kery io sy ny maro hafa toa ny rivotra, ranomasina ary biomassa no mety ho vahaolana amin'ity loza ity. Saingy raha tsy misy ny politika mazava, tsy dia antenaina firy. Brezila, ohatra, dia mandrakotra ny 50% amin'ny heriny amin'ny alàlan'ny angovo azo havaozina, indrindra ny biofuel. Fantatr'i Brezila tany am-boalohany fa afaka miroborobo ny firenena amin'ny alàlan'ny fampiasana loharanon-karena voajanahary sy azo havaozina amin'ny fomba mety. Mahagaga fa saika ny 90% ny fanjifana angovo dia avy amin'ny solika, 7% avy amin'ny angovo nokleary ary 3% ihany no rakotry ny angovo tsy azo havaozina, satria tsy dia hahagaga ny mpandraharaha solika maro izany, satria ny loharanon'ny angovo tsy mahazatra tsy mamokatra tombony be, toy ny menaka.
Mamaly an'i yan